Crypto urhwebo app Robinhood ukuqalisa ku eColorado - Blockchain News
UTshazimpuzi 22, 2018 admin
I-landscape wokhuphiswano for ukutshintshiselana cryptocurrency buba eUnited States. exchange Startup Robinhood nje kubhengezwa Twitter ukwanda yayo Colorado. Iqonga urhwebo iye nje obubhenqwe isigqubuthelo urhwebo commision-free for Bitcoin e eColorado.
Ngaphezu cryptocurrencies, i Palo Alto, platform yorhwebo Calif.-based ikwaxhasa isitokhwe, ETFs kunye iinketho.
Colorado, eyaziwa ngokuba encopho yayo Rocky Intaba kunye nemithetho blockchain-friendly, ajoyine iqela abambalwa ithi kudlulela California, Massachusetts, Missouri and Montana, zonke Robinhood wongezelela ekuqaleni Epreli njengenxenye ngurhulumente-by-karhulumente Ujikeleziso ezihamba kunye.
Post Previous:Bitcoin ATM inethiwekhi Coinsource isebenza kunye multi-factor umqinisekisi Acuant
Post Next:Iran siphelisa ngokusemthethweni ukusetyenziswa cryptocurrencies
UCanzibe 18, 2018 e 2:37 AM
Isilimela 3, 2018 e 3:06 AM